Wai Yan Electronics
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Official iPhone များ ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Authorized Service Provider များ ဖွင့်လှစ်တော့မည်။
ကမ္ဘာနံပါတ်တစ် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်သော Apple ၏ iPhone များကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ iPhone နှစ်သက်သူ မိဘပြည်သူများ တရားဝင်တစ်နှစ်အာမခံ (One Year Official Warranty)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် Wai Yan Electronics ဆိုင်ကြီး များတွင် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း စတင် ရောင်းချပေးတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ Wai Yan Electronics သည် အမေရိကန် အခြေစိုက် Apple ကုမ္ပဏီ၏ iPhone များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးသော AAR (Apple Authorised Reseller) ရထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Read Full Story Download PDF
Wai Yan Electronics အရောင်းဆိုင်ကြီးများ၏ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖွယ် ခြေလှမ်းသစ် တစ်ခု
Wai Yan Electronics ဆိုင်ကြီးများတွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သော Apple iPhone များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇) ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီ မိနစ် ၃၀ တွင် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် စတင်ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Wai Yan Electronics ဆိုင်ကြီးများမှ ဝယ်ယူသော iPhone များကို တရားဝင် တစ်နှစ်အာမခံစနစ် (One Year Official Warranty) ဖြင့် စိတ်ချ ၊ ယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Service နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ပြင်ပဈေးကွက်တွင် မရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နေရာထဲ၌ စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် ရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
iPhone 5s ကို Apple ၏ တရားဝင်အာမခံ (၁)နှစ်ဖြင့် ဈေးနူန်းသက်သာစွာ ၀ယ်ယူလိုသူများအတွက် သတင်းကောင်း
iPhone 5s ကို Apple ၏ တရားဝင်အာမခံ (၁)နှစ်ဖြင့် ဈေးနူန်းသက်သာစွာ ၀ယ်ယူလိုသူများအတွက် သတင်းကောင်း Apple မှ iPhone 5s များကို Apple စက်ရုံမှ Body အသစ် ၊ Screen အသစ်တို့ အပြင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် တိကျသေချာသော မွမ်းမံမှု များ ပြုလုပ်၍ Packing ဗူးအသစ် ၊ Original Accessories အသစ်တို့ဖြင့် ထုပ်ပိုးပေးထားသည့် iPhone 5s ကိုတရားဝင်အာမခံ (၁) နှစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါပြီ။
Home Appliances Accessory3-Friends3D Glass3D LED3D Plasma3D Smart3G4k5 Network
About Wai Yan Electronics
Since 1994, your most trusted Wai Yan Electronics has beenaleader in the market and the best multi-brand retail chain stores of Consumer Electronics, Home Appliances, Mobile Phones and IT products.
Contact Wai Yan Electronics
90 (A/B), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
Copyright © 2015 Wai Yan Electronics. All rights reserved.
Developed by Future ICT Solution
Copyright © 2015 Wai Yan Electronics.